Emulators yekutamba Yemahara Moto paPC 2021 - Android Pop ▷ ➡️
Mahara Emulators emoto ePc
Iwe unoda kuziva kuti ndechipi chakanakisa emulator kutamba Yemahara Moto pane yako PC, nhasi ini ndichatsanangura kwauri kuti ndeipi emulator yaunogona kuisa uye kushandisa kutamba Mahara Moto paPC yako. Mutambo weFree Fire wave wakakurumbira kwazvo mumakore achangopfuura, sezvo uri mutambo unogoneswa nemidziyo yemafoni.
Kunze kweizvozvo zvinonakidza kwazvo kuiridza, vamwe vanhu vakazvipira kune zvine hunyanzvi vachitamba uyu mutambo uye vamwe vanongotamba kuti vafare.
Nekudaro, hazvisi zvese zvakanaka, sezvo uri mutambo pakutanga wefoni mbozha, vazhinji vanoda kuiridza paPC yavo, asi parizvino haisi kuwanikwa yemakomputa Kune vanhu vazhinji vanoda kuyedza mutambo uyu asi vasingakwanise kuita zviri pamutemo, sezvo pasina chirongwa chepamutemo cheWindows kana Mac parizvino.
Asi ndinovimba munguva pfupi inogona tamba Yemahara Moto pakombuta tzvese Windows neMac. Sezvo parizvino iripo chete kune eApple uye IOS nhare mbozha.
Akanakisa emulators eMahara Moto 2021
Sei ikozvino haugone kutamba Mahara Moto paPC zviri pamutemo, inogona kuridzwa uchishandisa Android emulator. Nekushandisa emulator tinogona kutevedzera kuti isu tine nhare mbozha paPC yedu. Nenzira iyi iwe unogona kutamba Mahara Moto paPC yako, unogona kutamba nenzira yakati rebei, asi nekufamba kwenguva unozojairira.
Iye zvino ini ndinokupa iwe diki runyorwa rweakanakisa admin emulator Kuti utambe Mahara Moto paWindows kana Mac, sarudza iyo inokodzera PC yako. Ese emulators andichakuratidza iwe anokwanisa kumhanyisa Mahara Moto, unofanirwa kusarudza iyo yakanakisa emulator yeMahara Moto iyo PC yako inogona kumhanya. Iwo marongero emulators haasarudze kuti ndeipi iri nani, iwe unofanirwa kuona kuti ndeipi yakanakira iwe.
Emulator MEMU Tamba Iyo ndeimwe yeanonyanya kushandiswa kutevedzera Android pakombuta, saka zvichave nyore kwauri kuti umhanye Mahara Moto. Iyi emulator yatove neiyo Play Store yakaiswa kuti iwe utore mitambo yaunoda.
Iwe unogona kuita kumisikidza kwakasiyana nekhibhodi uye nemabatiro eFree Fire saka hauzove nematambudziko mazhinji kana uchiridza iyo.
Kuti umhanye MEMU Tamba unoda 4 GB ye RAM uye Dual Core, Intel kana AMD processor. Inowanikwa yekuchengetera 2 GB mashoma ekuisa, inogona kuiswa muWindows Vista, Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 uye paMac. Dhawunirodha Memu Play
Ipapo isu tine Nox App Player, emulator inotarisa zvakanyanya pakumhanya mitambo yemafoni paPC. Mimwe yevakanyanya kutambwa ndeyePUBG Nhare uye Yemahara Moto.
Iyi emulator yakakwana kune Yakadzika-yekupedzisira PC inoda zvishoma zviwanikwa sezvo iri yakareruka inorema angangoita 300 MB ndiyo imwe yeakareruka.
Izvo zvinodiwa kuti Nox App inoda kuiswa pane dzimwe nguva 2 GB ye RAM uye 1.5 GB yekuchengetera kunowanikwa kuti ugone kuisa mitambo uye zvinoshandiswa zvaunoda. Dhawunirodha Nox App Player
Chimwe chei vakareruka emulators pamusika, LDPlayer ndeimwe emulator yakatsaurirwa kumhanya nharembozha. Iyo emulator inokutendera iwe kumisikidza iyo keyboard uye iyo nguva, kuti iwe ugone kuwedzera mabasa kune iyo keyboard kiyi uye nemabhatani emouse.
Kugona kumhanyisa LDPlayer paPC yako zvinodikanwa kuti iwe uve ne2 GB ye RAM uye 9 GB yekuchengetera kunowanikwa. Iyi emulator inoda diki diki inochengeterwa kudzivirira iyo PC kubva mukudzikisira kana uchitamba mitambo. Iyo emulator ine Android vhezheni 5.1 uye 7.1.1 asi munguva pfupi ichave iine epamusoro-soro. Dhawunirodha LDPlayer
Tine emulator iyo ichangobva kuve inozivikanwa kwazvo nekuda kwekutamba kwayo kukuru kwemitambo mbozha paPC. SMARTGAGA iri emulator yaunogona nayo tamba Yemahara Moto paPC nenzira iri nyore sezvo ichitibvumidza kuve nekugadziriswa mubhokisi uye mbeva. Kugona kumhanyisa iyi emulator yakanyanya kukurudzirwa ndeye 4 GB ye RAM asi inogona kumhanyisa mu2 GB.
Pakati pezvimwe zvinodiwa zvinodiwa kuisa SAMRTGAGA, ive neIntel kana AMD processor. Izvo zvinodawo kuve ne2 GB yemahara yekuchengetedza pane yedu PC.
Emulator inogona kuiswa paMac uye dzese dzazvino vhezheni dzeWindows kwavari ndeimwe yeiyo Emulators akanakisa kuridza Mahara Moto. Dhawunirodha SMARTGAGA
Aya ndiwo emulators akanakisa aunogona kushandisa kutamba Mahara Moto paPC yako, unofanirwa kusarudza kuti ndeipi yaunoshandisa pakombuta yako. Sezvo ivo vese vane akasiyana mashoma anodikanwa. Urongwa urwu runogona kuchinja nekufamba kwenguva kugadzirisa sarudzo dzemushandisi.
Emulator, Android emulators, Free Moto, Mitambo
Mitambo Hondo Royale Android
Yemahara Internet Movistar 2021